म एनआरएन हाँक्न सक्षम छु
तेन्जी शेर्पा (महसचिब, NRNA)
तेन्जी शेर्पा गैर आवाशीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रय समन्वय समिति (एनआरएन) का महसचिब हुन् । सोलुखुम्बु सल्लेरीमा जन्मिएर दक्षिण कोरियाको सउल विश्वबिद्यालयबाट ईलेक्ट्रीकल ईन्जिनियरीङमा स्नात्तकोत्तर गरेका शेर्पासंग विश्वमा प्रतिष्ठित मानिने हुन्डाई ईन्जीनियरीङमा १५ बर्ष काम गरेको अनुभव छ । कोरियामा रहेर नेपालको पर्यटन प्रर्बद्धनमा र भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थानबारे रहेको भ्रम हटाउन बिशेष भूमिका निर्वाह गरेका शेर्पा हाल चमेलिया जलबिद्युत आयोजनामा प्रसारण लाइन अन्तर्गत सीनियर ब्यबस्थापक भएर काम गरि रहेका छन् । आउदो अक्टोबर महिनाको १९ र २० तारिखमा काठमाण्डौमा हुने संघको छैठौ अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले अध्यक्ष पदमा उमेरद्धार हुने घोषणा गरेका छन् । संघको स्थापना कालदेखिनै बिभिन्न तहमा स्टेप बाइ स्टेप काम गरेर पर्याप्त कार्यकुशलता हासिल गरेका, स्पष्ट बक्ता र बौद्धिक तीक्ष्णता भएका शेर्पा कोरिया आएका बेला पत्रकार देवेन्द्र सम्बाहाम्फेले गरेको कुराकानी :
१.एनआरएनको छैटौ कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदका लागि उम्मेरद्धारी घोषणा गर्नु भएको छ । यो घोषण के का लागि हो ?
म गैर आवाशीय संघमा शुरु देखिनै लागि परेको सक्रिय सदस्य हुँ । यसमा रहदा ‘स्टेप बाइ स्टेप’ सक्रिय काम गर्दै आएको छु राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सक्रिय पदहरुमा तीन कार्यकालसम्म काम गरिसकेको छु र साथीहरुले नै मलाई महासचिवको कार्यभार दिनुभएको हो । उहांहरुले मेरो कामको मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ । महासचिव पश्चात अर्को सकृय पद भनेको अध्यक्ष हो । जिम्मेवारी पाए अहिलेसम्म बटुलेका अनुभवहरुलाई सदुपयोग गर्दै सस्थालाई अझ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने लक्ष लिएको छु ।
बैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्याहरुको गहन अध्ययन अनुसन्धान गरेर देशको नीति निर्माणमा नै त्यसको समाधान राख्ने र विश्व मजदूरहरुको हक हित स्थापना गर्ने लक्ष लिएको छु । साथै देशको आर्थिक बिकासका लागि बैदेशिक तथा एनआरएनहरुको श्रम,सीप लगानी भित्रयाउने र समामाजिक परोपकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छु ।
यसका साथै खुल्ला विश्व विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनको लागि सरकारसँगको सहकार्य निरन्तरता राख्दै शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्न साइन्स फाउन्डेसनको स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक तथा प्राबिधिकहरुको योग्यता, क्षमता, सीप तथा प्रबिधिलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने सोच बनाएको छु । यस्तै योजना कार्यन्वयनका लागि मैले उमेरद्धारी घोषणा गरेको हो ।
२. योजना त बनाउनु भयो तर अध्यक्ष पदमा चयन हुने तपाईका आधार चाही के के हुन् ?
मैले लिएको उद्धेश्य नेपाल र नेपालीहरुको हितको पक्षमा भएकाले साथीहरुले मूल्यांकन गर्नु हुने छ भन्ने मैले आशा गरेको छु । साथै एनआरएनको अभियानमा लागि पर्नु भएका सबै अग्रज तथा समकालीन साथीहरुको सहयोग, सुझाव र सदभावलाई मैले आफ्नो बिजयको आधार मानेको छु । संस्थामा आहिलेसम्म सहमतिको आधारमा अध्यक्ष चयन गर्ने संस्कृति स्थापना गरेका छौ । मैले सबै साथीहरुबाट यहि अपेक्षा गरेको छु । म एनआरएन हाँक्न सक्षम पनि छु ।
३.संघको बिभिन्न तहमा रहँदै आउनु भएको छ । यो अवधिमा के के काम गर्नुभयो नि ?
संघको बिभिन्न तह हुँदै महासचिब भएको छु । यो यात्रामा केहि राम्रा कामहरु पनि गर्ने मौका पाएको छु । जस्तै बुद्ध जयन्तीको अवसरमा कोरियामा मानिने लोटस लालटिन फेस्टिभलमा धेरै पटक गएको थिए । त्यहाँ हुने प्रवचनमा लामाहरुले बुद्धको जन्म भारतमा भएको उल्लेख गर्थे । त्यो सुनेर म अत्यन्त दुखि भएँ । त्यसैले यो भ्रम हटाउन एनआरएन मार्फत बुद्ध नेपाल को कन्सेप्ट ल्याएँ र बुद्ध कुन देशमा जन्मिएका हुन् ? भन्ने एक प्रश्न राखेर अर्को वर्ष पांच सय बौद्धमार्गीलाई प्रश्न गर्यौ । यी मध्ये सात प्रतिशतले मात्र ‘नेपाल’ भनेर उत्तर दिए भने ९३ प्रतिशतले अन्तै भनेका थिए । कोरियामा यो भ्रम मेटाउन बुद्ध नेपाल कार्यक्रमले ठुलो भूमिका खेलेको छ । अहिले यहि कन्सेप्ट विश्वमा ‘बुद्ध बोर्न इन नेपाल’,‘बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल’ जस्ता अभियानहरु संचालन भएका छन् । यी अभियानले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेपालको पर्यटन प्रर्बद्धनका लागि सहयोग पुगेकै छ ।
साथै नेपालको जल बिद्युुत बिकासमा सहयोग गर्ने उद्धेश्यले कोरियामा ‘पावर नेपाल २००९’ नामक वर्कशप संचालन गरेका थियौ । यो पनि मेरै कन्सेप्ट थियो । यो वर्कशपमा सहभागी केहि ठूला कम्पनीहरुले नेपालमा काम गरिरहेका छन् भने अरु कम्पनिहरु लगानीका लागि तयार गरिरहेका छन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आईसीसी) को मेरो कार्यकालमा कुवेतमा फाँसीको सजाय सुनाइएकी डोल्मा शेर्पालाई बचाउनका लागि अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा ‘डोल्मा बचाउ अभियान’ को संयोजक भएर काम गरेको थिएँ । यस अभियानमा विभिन्न देशमा रहेका गैर आवाशीय नेपालीहरुबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ । यो अभियानले परेका बेला नेपालीहरु एकजुट हुन सक्छन भन्ने उदाहरण दिएको छ ।
४ . एनआरएनले उठान गरेको सामुहिक लगानीको अवाधराणा सोचे जस्तो सफल नहुनुको कारण के हो ?
एनआरएन गैर नाफामुलक संस्था भएकाले प्राइभेट कम्पनीको स्थापनाबाट सामुहिक लगानीको अवधारणामा ल्याएका हौं । यसै अनुरुप सामुहिक लगानीबाट हाम्रो कार्यकालमा एक सय मेगावाटको हाइड्रोपावर ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थियौ । त्यसको पहिलो चरणमा २७ मेगावाटको काम शुरु भएको छ । यो पहिलो चरणको लगानी भएकाले यसलाई पनि उपलब्धी मान्नुपर्दछ । अरु थप परियोजना संचालन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले अहिले नै मूल्याकंन गर्न नमिल्ला की ? आगामी कार्यकालमा पनि गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई अझ बढी नेपालमा भित्र्याउन उत्प्रेरित गर्ने काम सस्थाले गर्ने छ ।
५.एनआरएनलाई केहिले हल्ला गर्ने थलो नि भनेका छन् नि ? यो सत्य हो वा आरोप मात्र हो ?
संघको सम्भावना बारे हामीले शुरुदेखि नै स्पस्ट बताउदै आएका छौ । त्यसमध्ये केहि साथीहरुले हाम्रो वास्तविक सम्भावना भन्दा अलि बढी नै बोलेका छन् । यसलाई हामी सहर्ष स्वीकारेका छौ । अर्को कुरा समृद्ध भइसकेका साथीहरुको संख्या एकदमै कम छ । यति हुँदाहुँदै पनि एनआरएन समृद्ध र धनाढ्यहरुको संस्था हो भन्ने भावनाका कारण अपेक्षा केहि बढी भएको पनि हो । तर यो अपेक्षालाई पथ प्रदर्शकको रुपमा मानेर काम गर्ने छौ ।
६. तपाईहरुले उठाउनु भएको दोहोरो नागरिकताको सवाल कहाँ पुग्यो नि ?
नेपालको नागरिकता ऐनमा ‘दोश्रो देशको नगरिकता लिएको खण्डमा रहिरहेको नेपालको नागरिकता स्वत रद्ध हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । हामीले यसलाई हटाउने प्रयास गरेका छौ । यदि यो बुंदा हटाएमा दोश्रो देशको नागरिकता लिएर त्यो देशको बिभिन्न सुविधाहरु धेरै एनआरएनले उपभोग गर्न पाउने छन् । यी सबै कुराहरुलाई संविधानमा किटान गरेर लेख्नका लागि नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय र दलका नेताहरुसंग बार्ता गरेका थियौ । बार्तामा सरकारको तर्फबाट अब बन्ने संबिधानमा सामाजिक,आर्थीक,सास्कृतिक लगायतका सबै खालको अधिकार हुने तर राजनीतिक अधिकार चाही नदिने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो । यो प्रस्तावमा हाम्रो असहमति थियो । यसलाई दोहोरो नागरिकता नभनि ‘नेपाली नागरिकताको निरन्तरता’ भन्दै ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली ’ भन्ने अवधारण अघि सारेका छौं । अब बन्ने संबिधानमा यी कुरालाई प्रष्ट अंकित गर्न हाम्रो जोडदार प्रयास रहने छ ।
७.संघको दर्ता चाही कहिलेसम्ममा हुन्छ नि ?
संघको बिधान र नेपालको ऐनमा भएको परिभाषामा केहि फरक भएकाले सरकारले दर्ता गर्न नसकिने पत्राचार गरेको छ । हाम्रो बिधान विश्व सम्मेलनमा हुने साधारण सभाबाट मात्र संशोधन हुने भएकाले आउदो सम्मेलनमा परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्नेछौ । त्यसले सम्भवत संघ दर्ताको बाटो खुल्नेछ ।
८.संघमा सदस्यताको बाहुल्यता मजदूरहरुको छ तर नेतृत्व तहमा जहिले जहिल्यै ब्यापारी र व्यावसायीको मात्र हुन्छ । के यो जायज हो ?
एनआरएनको महान अभियानमा निश्चय पनि संसारको विभिन्न मुलुकमा श्रम गरिरहनु भएका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको सहभागिता उच्च छ भने नेतृत्वमा ब्यापारी र व्यावसायीको हाबी देखिएको पनि वास्तविक हो । ब्यापारी र व्यावसायीको सकृयता र योगदानले यस्तो देखिएको मात्र हो । म पनि मजदूर भएकाले अध्यक्ष भएँ भने यो भ्रम पनि संगसंगै मेटिने छ ।
९.एनआरएनले हालसम्म मजदूरको हक अधिकारबारे कस्ता पहलहरु गरेको छ ?
संघको प्रत्येक विश्व सम्मेलनमा बैदेशिक रोजगार बिषयहरुलाई उठाएका छौ । बिभिन्न बैठकहरुमा ‘सुरक्षित आप्रवासन’ कोबारेमा छलफल गरेका छौ । यसै कार्यकालमा फरेन इम्प्लाइमेन्ट इम्फरमेशन सेन्टर शुरु गरेका छौ । प्रत्येक गाबिसहरुसम्म पुगेर बैदेशिक रोजगारबारे र गन्तब्य मुलुक सम्बन्धी सूचना दिनु यसको उद्धेश्य रहेको छ । त्यस्तै दुइ पटक श्रम अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई हाम्रै प्रयासमा सहजीकरण भएको छ । बिमानस्थलमा सूचना डेस्क राख्ने हाम्रो प्रयास केहि हदसम्म सफल भएको छ । मध्यपूर्वका केहि देशहरुको नेपाली दूताबासमा एनआरएन डेस्क राखेका छौ । यो डेस्कले बैदेशिक रोजगारमा भएका समस्याहरुको सहजिकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यस्तै हामीले निर्माण परोपकारी कोष मार्फत बैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्यु भएकाहरुलाई थोरै भए पनि सहयोग गरेका छौ । यू एन वोमन र नेपालको नेट्स भन्ने संस्थासंगको सहकार्यमा हामीले लेबनान,कुवेत,साउदिअरब लगायत चार देशमा काम गरिरहेका नेपाली महिलाहरुको स्थिति अध्ययन गरेका छौ । यसको नतिजा आउदो विश्व सम्मेलनमा सार्बजनिक गर्दै छौ । यो प्रतिवेदनले बैदेशिक रोजगारमा भएका महिला सम्बन्धी समस्या नीतिगतरुपमा न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुर्याउने आशा लिएका छौं ।
१०.संघलाई राजनीति मुक्त गर्ने भनेर भाषण हुन्छ तर ब्यबहारमा त्यो देखिन्दैन नी ?
गैर आवासीय नेपाली संघ गैर राजनीतिक संस्था हो । संस्था गैर राजनीतिक भए पनि यसमा राजनीतिक विचार राख्न नपाइने भन्ने छैन तर संघको विधानले निर्दिष्ट गरेको अभियान र एजेन्डामा केन्द्रीत भएर राजनीति गरिनुहुन्न भन्ने हो । थोरै मात्रामा नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थितिले प्रभाव नपारेको भने होइन । समयको गतिसंगै यो प्रभाव बिस्तारै हराउदै गएर एनआरएन साँच्चै गैर राजनीतिक संस्थाको रुपमा स्थापित हुने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।
११.कोरिया कसरि आउनु भएको थियो ?
म सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा जन्मिएकाले प्रवेशिका त्यहीबाट उत्तीर्ण गरेको थिएँ । आइएस्सी अमृत साइन्स कलेजबाट गरेपछि इलेक्ट्रोनिक ईन्जीनियर अध्ययन गर्न २०४४ सालमा कोरिया आएको हो । संगैका साथीहरु यूरोप ,आमेरिका,रुस आदि देशमा गए तर नेपालका लागि कोरिया नौलो गन्तब्य थियो । सन् १९८८ को ओलम्पिक गेम निर्णय भइसकेको थियो भने १९८७ को एशिया गेमले चर्चामा ल्याएको थियो । त्यसैले कोरिया आउने माइन्ड सेट आफैले गरेको थिएँ ।
१२ .कोरियामा एनआरएन स्थापना कसरि गर्नु भएको थियो ?
कोरियामा नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गएपछि एउटा संगठनको आवश्यकता महशुस हुन थाल्यो । यसै क्रममा १९९३ मा केहि साथीहरुसंग मिलेर नेपाली सम्पर्क समितिको स्थापना गरेका थियौ । यो संस्था मार्फत समस्यामा परेका धेरै नेपालीहरुको हितमा काम र विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्यौं । यस्तै कृयाकलापमा लाग्दै जाँदा २००६ मा रुद्र शर्मा,सुरेश सुब्बा,केपी सिटौला,ध्यान राई,देवी बस्नेत,दिनेश हिराचन आदि साथीहरुसंग मिलेर एनआरएनको स्थापना गरेका थियौं ।
१३ . हुन्डाई इन्जीनियरीङमा रहंदा बिशेष कस्ता खालका कामहरु गर्नुभयो ?
सोल विश्व बिद्यालयबाट अध्ययन सक्नेबितिकै हुन्डाई इन्जीनियरीङ कम्पनीबाट १९९५ मा रोजगारीको लागि अफर आएको थियो । यसमा मैले १५ बर्षसम्म काम सीनियर म्यानेजर पदसम्म पुगेर काम गर्ने मौका पाए । यो अवधिमा इलेक्ट्रीकल इन्जीनीयरिङ र हाइड्रो पावर सम्बन्धी धेरै प्रकारका कामहरु गरें। जस्तै पावर प्लान्ट,पम्प स्टोरेज पावर प्लान्टको निर्माणका साथै पम्प स्टोरेज पावर प्लान्ट,थर्मल पावर प्लान्टहरुका लागि इलेक्ट्रिकल डिजाइनहरु गरें । मेरा डिजाइनहरु ब्राजिल,इण्डोनेसीया र कतार लगायत मध्यपूर्वका धेरै देशहरुमा प्रयोग भइरहेका छन् । सन् १९९८ देखि २००० सम्म नेपालको मोदीखोला जलबिद्युत आयोजनामा हुण्डाईको तर्फबाट प्रतिनीधि भएर काम गरेको छु । कोरियाको इलेक्ट्रिक इन्जीनियरीङ प्रविधिलाई विश्वब्यापी गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएकाले यहांको सरकारले२०१०मा मानार्थ नागरिकता प्रदान गरेको छ ।